Ingabe Uvulekele Uhlelo Olusha Lokulawulwa Kokuqukethwe? | Martech Zone
Eminyakeni embalwa edlule, kusetshenziswe i-100% yamakhasimende ethu WordPress njengabo uhlelo lokuphatha okuqukethwe. Ngemuva kweminyaka emibili nje kuphela futhi lelo nani lehle cishe ngesithathu. Njengoba bengilokhu ngakha futhi ngakha amasayithi kuWordPress iminyaka eyishumi manje, ngivame ukubheka kuleyo CMS ngenxa yezizathu ezimbalwa.
Kungani Sisebenzisa i-WordPress
Amazing Theme ukuhlukahluka nokusekelwa. Amasayithi afana I-Themeforest ziyintandokazi kimi lapho ngingathola khona izifanekiso ezimangalisa kakhulu ngezindleko eziphansi esingazisebenzisa futhi sakhele phezu kwamakhasimende ethu. Asisazinikeli ngisho nezindikimba ezingokwezifiso njengoba singakhela phezu kwesakhiwo se- ingane indaba futhi uthathe zonke izici ezimangazayo zetimu yomzali. Amasayithi angajwayelekile angakhiwa ngengxenyana yesikhathi.
I-plugin nokuhlanganiswa ukuhlukahluka nokusekelwa. Ngoba amasayithi amaningi asebenzisa i-WordPress, kufanele kunoma iyiphi inkampani efisa ukuhlanganiswa nohlelo lokuphathwa kokuqukethwe. Kusuka kubathengisi be-imeyili, i-CRM, izixazululo zekhasi lokufika, njll. Cishe kunzima ukuthola inkampani engakahlanganisi.
Ukusetshenziswa ukuyo yonke indawo, ngakho-ke ukuthola abasebenzi nabaphathi abasebenzisa i-WordPress indawo ejwayelekile. Ukwenza kabusha i-CMS entsha kungadinga isikhathi esingeziwe sokuqeqeshwa ngaphakathi enkampanini, ngakho-ke ukusebenzisa okuthandwayo kungenza izinto zibe buhlungu kakhulu ngaphakathi.
WordPress Amapulatifomu Okusingathwa Wokuphatha njengoFlywheel, WPEngine, onkulunkulu, LiquidWeb, ngisho GoDaddy, nokuningi sekuyinsakavukela. Izinkampani ezindala zokubamba izinkampani azikaze zisekele i-WordPress yize ibidume kakhulu ngakho izinkampani ngokuvamile bezisempini phakathi komphathi nonjiniyela kokungahle kube yiphutha ngaleli sayithi. Lezi zinsizakalo zinikeza ukuphepha, izipele ezakhelwe ngaphakathi, amanethiwekhi wokulethwa kokuqukethwe, izitifiketi ze-SSL, ukuqapha, ukubeka esiteji, namanye amathuluzi amaningi okwenza isiza sakho sisheshe futhi sizinze.
Uma lokho kuzwakala sengathi ngithengisa i-WordPress, hlala nami. Kuvele izingqinamba eziqala ukusenza sincoma amaklayenti kwamanye ama-Management Management Systems.
Kungani Singasebenzisi I-WordPress
Sales - I-WordPress ibisetshenziswa ekuthuthukiseni kunoma iyiphi insizakalo ehlobene nokuthengisa, itimu noma i-plugin. Babevame ukuvimba noma ngubani kusuka kumathuluzi wokushicilela ngaphakathi kohlelo lwabo olunikeza umaki wentengo kuwo. Kepha manje, uma uhlanganisa Jetpack, uhlangatshezwa nemilayezo ye-nag yokuthenga izinsizakalo zokulondoloza ze-Automattic. Ngakho-ke, ngokungazelelwe abameli bemithombo evulekile manje sebethengisa izinsizakalo zabo. Angijabule ukuthi bayakwenza lokhu, ukuthi nje bekujwayele ukubukelwa phansi.
Security - Ngenxa yokuthandwa kwayo, i-WordPress nayo isibe isisulu kubaduni. Isayithi elijwayelekile elinetimu ekhiqizwe kahle nama-plugins ayishumi nambili angashiya imbobo ivulekele abaduni ukuze abanikazi besiza, abaphathi, nababungazi kufanele baqaphe ngokwengeziwe ekuhlaseleni futhi bahlale ngaphezulu kwengqikithi nezibuyekezo ze-plugin.
Development - Ngineklayenti elinesayithi nesethi ejwayelekile yama-plugins njengamanje enezikhombo ezingaba ngu-8 -Google Amafonti kunhlokweni yabo ngoba ingqikithi yabo kanye nama-plugins amaningi wokuklama konke bayayinikeza njengensizakalo. Yize kunendlela yokusebenza yokuqinisekisa ukuthi insiza ayibizwa kaningi, abathuthukisi abayinaki bavele bangezela izinkomba zabo. Lokhu kulimaza isayithi ngejubane nokukala ... futhi akuyona into umsebenzisi ojwayelekile angayazi ngaphandle kokuxazulula inkinga. Imikhuba emibi ku-WordPress API ukuhlanganiswa kuya ngokuya kwanda kakhulu. Nginamathikithi amaningi avuliwe nabathuthukisi ukulungisa lezi zinkinga. Iningi liphendula, iningi alinjalo.
kushuba - Ikhasi lasekhaya elijwayelekile ku-WordPress lingaba nezici ezikhishwe kumawijethi, amamenyu, izilungiselelo zesayithi, izilungiselelo zetimu, nezilungiselelo ze-plugin. Kwesinye isikhathi ukuhlela into eyodwa ekhasini, ngichitha imizuzu engama-30 ngizama ukuthola ukulungiselelwa! Kuyakhathaza ukuthi i-WordPress ayenzanga umkhuba omuhle wokuqinisekisa ukuthi abathuthukisi babeka izilungiselelo zabo lapho kulula ukuthola nokuvuselela khona.
Ngakho-ke, yiziphi ezinye izinhlelo zokuphathwa kokuqukethwe esizisebenzisile? Ngenkathi siqhubeka nokubheka ukuncika ku-WordPress nge ikhono lokwenza injini yokusesha luthuthukiswe, sibona imiphumela emangazayo nezinye izinhlelo zokuphathwa kokuqukethwe:
Isayithicore - sisize amaklayenti ambalwa wamabhizinisi asebenzisa ubuchwepheshe beMicrosoft ezinkampanini zawo futhi asebenzise iSitecore. I-CMS emnandi enokusekelwa okukhulu esikhaleni sebhizinisi. Ngeke sinqikaze ukukuncoma.
Isikwele sendawo - kwe-non-technical do-it-yourselfer, angiqiniseki ukuthi kukhona i-CMS engcono laphaya kune-squarespace. Ngineklayenti elilodwa elikwazile ukwakha isayithi lalo emasontweni ambalwa lingenalwazi futhi umphumela waba muhle. Sisize ukulungisa nokulungisa isiza, kepha ukuqaliswa kwe-WordPress bekungeke kusetshenziswe ngesikhathi esifanayo. Isayithi langaphambilini laliyi-WordPress futhi ukuphathwa kwakunzima kakhulu ukuthi iklayenti lizulazule futhi livuselele. Babekhungathekile ngaphambili, futhi manje bajabule! Futhi iSquarespace nayo inikela ngezici ze-ecommerce.
I-Craft CMS - sisiza iklayenti, Canvas, nokwandisa indawo yabo kuCraft CMS futhi sengivele ngithandana nobulula bayo nokusetshenziswa kwayo kalula. Kukhona nenethiwekhi ebanzi yama-plugins asekelwa kahle we-Craft CMS futhi okwenza kube lula ngathi ukufaka izithuthukisi kusayithi lokusesha nokwenza ukuguqulwa.
Weebly - enye ipulatifomu ye-DIY eqhubeka nokusithuthukisa futhi isimangaze kuzici zayo ezicebile, kufaka phakathi i-ecommerce. Asikaphathi iklayenti lapha okwamanje, kepha ukuhlanganiswa okuningana kwe-Weebly (izinhlelo zokusebenza) kukhulu kakhulu futhi kubonakala sengathi kunakho konke umuntu akudingayo.
Kukhona abanye laphaya abathanda I-Wix noma ezinye izinhlelo ze-CMS eziphathelene. I-Wix ibinezinkinga ezithile nge-Google ekhomba amasayithi abo kepha isebenze kanzima ukwenza amasayithi abo abe nobungako bosesho futhi amasayithi abo akhonjwe njenganoma ibaphi abanye abakhona. Angikaze ngibe nokuhlangenwe nakho ngeWix eminyakeni yamuva nje ngakho-ke angizukuyihlulela lapha.
Yiziphi Izici ze-CMS Odingayo Ngonyaka Olandelayo?
Ngaphandle kwezinjini zokusesha kanye namandla ezokuxhumana nabantu, sibheka amaklayenti ethu ukuthi abone ukuthi yini ayidingayo ohlelweni lokuphathwa kokuqukethwe. Ukwenza ucwaningo olusheshayo lwamanye amasistimu abo - ikakhulukazi i-CRM yabo - kungasenza sibaphoqelele kolunye uhlangothi noma kolunye uhlangothi ngenxa yokukhululeka kokuqaliswa nokwesekwa kokuhlanganiswa okuvela eceleni. Amawebhusayithi angaphezulu kakhulu kwencwajana edijithali kulezi zinsuku - ngakho-ke ukuqonda ukuthi i-CMS izongena kanjani kweyakho ukumaketha nokuthengisa uhambo kubalulekile ekukhetheni kwakho kwepulatifomu.
Ngabe Unamathele nge-CMS Yakho?
Futhi sibheka ukuncika. Uma i-CMS ingenawo amandla wokuthunyelwa kwamanye amazwe noma ukungeniswa kwempahla ngendlela esobala, ingaba yisizathu sokukhathazeka. Cabanga nje inkampani yakho isebenza kwi-CMS iminyaka eminingana, iziphathimandla zokwakha ngezinjini zokusesha, nokushayela amathani wokuguqulwa ukuthola nje ukuthi usebenzisa i-CRM entsha engasekelwa nganoma yikuphi ukuhlanganiswa. Ithimba lakho linquma ukuthi lifuna ukuthuthela kwelinye izwe kodwa i-CMS ayinikeli ngamathuluzi okwenza lokho.
Sikubonile lokhu kaningi - lapho inkampani iboshwe futhi ivalelwe kumthengisi wayo. Kuyakhathaza futhi akudingekile. Umhlinzeki omkhulu we-CMS ozethembayo uqobo uzohlala enikela ngezindlela zokuthuthela kuyo noma ngaphandle kwayo kunokuzama ukukhiya kumakhasimende ayo.
Ukudalulwa: Sisebenzise izixhumanisi ezihambisanayo ngaphakathi kwalokhu okuthunyelwe.
Tags: CMScms ukuncikaukuthuthukiswa kwamasentimithacms izicicms ukuhlanganiswacms ukuthengisacms ukuphephauhlelo lokuphatha okuqukethweamasentimitha wezandlaindawosquaeveracesibindekileWix
Umhleli weVecteezy: Isihleli Samahhala SVG Online
Jul 4, 2017 ku-5: 46 AM
I-athikili ethokozisayo. Yize ngizwa sengathi i-WordPress ihlakaniphile impela, ayinalo ikhono lokuthuthukisa izinhlelo zokusebenza zobungcweti. Ngezidingo ezinjalo, uzodinga iSayithifinity, iSitecore, i-Umbraco noma amanye ama-CMS afanayo.